Barcelona oo xiiseynaysa inay Miralem Pjanic ku soo beddelato xiddig ka tirsan Kooxda Chelsea – Gool FM
Haaruun May 12, 2021
(Barcelona) 12 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xiiseynaysa inay heshiis is-dhaafsi ah la sameyso naadiga Chelsea ee ka dhisan dalka Ingiriiska.
Wargeyska Sport ee ka soo baxa Spain ayaa warinaya in Barcelona ay xiiseynayso inay laacibkeeda khadka dhexe ee Bosnia, Miralem Pjanic ku soo beddelato laacibka Kooxda Chelsea ee Jorginho.
Warararka laga helayo dalka Spain ayaa intooda badan sheegaya in kooxda reer Spain ay doonayso inay laacibkeeda khadkad hexe ee 31-sano jirka ah Miralem Pjanic ku beddelato ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Talyaani, kaasoo ah 29-sano jirka ka tirsan Chelsea ee Jorginho.
Pjanic oo 31-sano jir ah ayaa kaliya ugu soo dhaqaaqay garoonka Nou Camp heshiis is-dhaafsi ah oo uu kaga yimid Juventus, kaddib markii uu dhinaca kooxda reer Talyaani u dhaqaaqay Arthur Melo.
Ciyaaryahanka reer Bosnia ayaa xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee Catalonia ku qaatay si niyad jab ah, isagoo ku guuldarreystay inuu boos joogto ah ka helo safka hore ee Tababare Ronald Koeman, natiijadaas ayaa ka dhigtay in haatan la la xiriiriyo in qeyb looga dhigayo heshiiskan is-dhaafsiga ah ee dhinaca Chelsea loogu dirayo si Blues looga soo qaato Jorginho.
Wargeyska ka soo baxa Spain ee Sport ayaa daabacay in Kooxda Chelsea ay diiradda saarayso xaaladda heshiiskan is-dhaafsiga ah oo ay Pjanic ku soo beddelanayso Jorginho suuqa xagaagan.